Isaguga sikhala ngokungayitholi indlu yomxhaso | News24
Isaguga sikhala ngokungayitholi indlu yomxhaso
Indlu lapho kuhlala khona uNkk Mkhize.IsiTHOMBE: lethiwe makhanya
ISAGUGA saKwaMpumuza sithi asisazi ukuthi kumele senzenjani ukuze sizokwazi ukuthi sithole indlu yomxhaso kahulumeni.
UNkk Phumaphi Mkhize (73) uthi sekuphele iminyaka abhalisela indlu yomxhaso kodwa akayitholi kuze kube yimanje. Uthi okumphatha kabi kakhulu ukuthi abantu abhalisa kanye nabo bona sekuneminyaka bazithola ezabo izindlu kanti abanye ababhalisa ngemuva kwakhe nabo sebazithola ezabo izindlu.
“Kumanje ngihlala endlini yodaka enama gumbi amabili enothayela abasekelwe ngamatshe abangawa noma yinini. Le ndlu engihlala kuyona yayinamagumbi ali-11 kudala kodwa ilokhu iwa ngizama ukuyilungisa kwaze kwaba nami sengiphelelwa amandla sengiba mdala angisakwazi ukubhanda.
“Ngabhalisa kwaze kwaba ikabili kulaba abakha izindlu baka-Vulindlela Develeopment Project (VDA) kodwa namanje anginayo indlu. Banginikeza inombolo yendlu okukhombisa ukuthi isicelo sa mi saphumelela kodwa abangakheli. Njalo bahleli befika bengitshela ukuthi angilinde ngizoyithola indlu kodwa ngiyabona ukuthi bangilindise into engekho engayi ndawo. ,” kubeka yena.
UNkk Mkhize uthe impilo inzima njengoba ehlala nomzukulu wakhe oneminyaka eyisikhombisa ubudala kanti futhi baphila ngemali yempesheni.
“Into engiyicelayo ukuthi nami ngakhelwe indlu ngoba kade ngayibhalisela nganikezwa nenamba. Akuphephile ukuhlala kule ndlu engihlala kuyona njengoba amatshe lawa abambe othayela phezulu ake awa abulala impahla endlini ngaphakathi.
Manje sisabela izimpilo zethu ukuthi angahle awe ashaye thina ngokulandelayo. Uma ngingathola indlu ngingakwazi ukuqhubeka ngiziphilise mina nomzukulu wami ngale mali yempesheni engiyitholayo ngoba iyasenelisa thina sobabili.”
I-Echo iphinde yathola ngamanye amalunga omphakathi ukuthi kukhona abanye abantu abazigwazela lezi zindlu.
Okhulumela u-VDA uMnu Bhoyo Kunene
uthe abasebenzi baka-VDA baloku beshaqekile njengoba sekunesikhathi bezama ukuxazulula udaba lukagogo. Uthe inkinga akusiyona indaba yenombolo yendlu kodwa kunzima ukuthola indawo yakhe njengoba kumele uqale ungene kweziye izindawo zabantu ngaphambi kokuthi ufike kuyena.
“Siyaxoxisana nabanikazi bezindawo ezithintekayo lapho kungatholakala khona indaba kagogo kantio lezi zingxoxo sezinesikhathi ziqalile. Sinethemba elikhulu ukuthi sizothola ukuluxazulula lolu daba ngokuthula,” kubeka yena.
Ephendula ngodaba lwezindlu okusolwa ukuthi zidayiswa uthe sebeke bawezwa amahebezi kodwa abukho ubufakazi asebeke bakuthola wabe ese nxusa noma ubani ongahle abe nolwazi ngaloku ukuba aphumele obala. Uthe uhlelo lwezindlu luyaqhubeka kanti kulindeleke ukuba luphothulwe ekupheleni konyaka ozayo.